Dhammaan wixii ku saabsan dabeecadda dhuleed ee bisadaha | Bisadaha Noti
Bisaduhu waa dhul aad u dhul badan. Xitaa jacaylkaas aadka u kalgacalka leh iyo dhogorta bulsheed waxay awood u leedahay inay difaacdo mitirrada dhulka ee uu u arko inuu isagu leeyahay, wuu xitaa la dagaallami karaa haddii uu u arko inay lagama maarmaan tahay. Tani waa wax, marka ay tahay tan kaliya ee dhogorta badan ee guriga, aan badanaa keenin wax dhibaato ah, ama aan mid halis ah ahayn, laakiin markii bisad labaad la keeno, xaaladdu waxay noqonaysaa mid aad u cakiran.
Wixii aan ka nahay xubin cusub oo qoyska ah, saaxiibkeen qaaliga ah "duqow" waa kireyste, shisheeye aan dhammaystirnayn oo gurigaaga ku soo duulaya. Badalida maskaxdaada waxay qaadaneysaa waqti iyo dulqaad, mararka qaar dulqaad badan. Sababta Si aad uga jawaabto su'aashan, Waxaan kuu sheegayaa wax walba oo ku saabsan dabeecadda dhuleed ee bisadaha.
1 Waa maxay dhulka doofaarka sideese loo qaybiyaa
2 Immisa boos ayey u baahan tahay bisadu?
3 Sideed u calaamadeysaa dhulka?
3.1 Waa laga hortagi karaa?
4 Sideen kaaga caawin karnaa inaad dareento raaxo badan guriga?
5 Waxa la sameeyo marka bisadu aad u dhul ahaato
6 Xadka xadka bisad duurjoogta ama nus-ka-xorta ah
7 Bisadu goorma ayey calaamadeysaa dhulkeeda?
8 Hawlaha calaamadaha bisadaha
Waa maxay dhulka doofaarka sideese loo qaybiyaa
Dhulka doofaarku waa aagag loogu talagalay shaqooyin gaar ah, oo noqon kara wax ka yar ama ka ballaadhan iyadoo ku tiirsan, ka sarreeya dhammaan, da'da bisadda iyo inay dhexdhexaad tahay iyo in kale. Meelahaasi waa:
Aagga waxqabadka: halkan bisadu waxay ku qabataa hawl maalmeedkeeda: wax cun, ciyaar, is nafiso ... Aaggan waxaa loo qaybiyaa meela kala duwan, marka, tusaale ahaan, cunista ayaa looga soocayaa baabi'inta.
Aagga go'doonka: aaggan waxaa loo isticmaalaa in lagu qaato waqti kali ah, ama in la seexdo ama laga fogaado waxa sababaya waqtigaas diiqada.
Aagga gardarada: halkan bisadu waxay ku dambayn kartaa weerar haddii ay u aragto inay ku habboon tahay.
Saddexdaan aag waxay ku xiran yihiin wadooyin, kuwaas oo dhogorta ay sameysmeyso laga bilaabo maalinta ugu horreysa ee ay dibadda u baxdo. Waligood jabin maayaan, in qoysku ka guuro mooyee ama bisad kale, oo isaga ka xoog badan, ay isaga ka saarto dhulka, taas oo ka dhex dhacda dadka cadhada leh ee had iyo jeer ku nool waddada.
Immisa boos ayey u baahan tahay bisadu?
Bisadaha aan waligood guriga ka bixin waxay leeyihiin dhul si fiican loo qeexay: guriga laftiisa; laakiin kuwa bannaanka u baxa ayaa "xukuma" meel aad u ballaadhan. Booskani waa ka weyn yahay marka loo eego bisadaha labka ah ee aan la dhexgelin, maadaama ay iyagu yihiin kuwa aadaya raadinta dheddigga. Bisadaha aan nafaqada lahayn sidoo kale waa kuwo aad u fog (1 ama 2 baloog), laakiin waxaad had iyo jeer ka heli doontaa iyagoo ku dhow meesha ay cuntada ka helaan.
Marka laga hadlayo bisadahaas la dhexdhexaadinayo, booska ay u baahan yihiin aad buu uga yar yahay. Xaqiiqdii, waxaan kuu sheegi karaa in ragga aysan u janjeerin inay ka leexdaan wax ka badan hal waddo, haweenkuna caadi ahaan waxay leeyihiin dhul qiyaastii gaaraya 400 ama 500m.
Sideed u calaamadeysaa dhulka?
Bisadu waxay ku calaamadeysaa dhulkeeda siyaabo kala duwan:
Kaadida: dusha sare.
Oo leh xoqan: alaabta guriga, barkimooyinka, iwm.
Isu salaaxida walxaha: waa sidaad uga tagi lahayd promromones-ka wajigaaga.
Waxaad macluumaad dheeraad ah ka haysaa mowduucan Halkan.
Waa laga hortagi karaa?
Maya. Bisadu waxay ubaahantahay, dareenkeeda gaarka ah, inay calaamadeyso dhulkeeda. Waxa aan sameyn karno waa inaan tuurnaa inta uusan kululeyn, maadaama sidaan oo kale aan uga hortageyno inay ku calaamadeyso kaadi iyo, si kadis ah, qashin aan loo baahnayn. Sidoo kale waa lagama maarmaan inaan ku siino xoq (ama dhowr) si aad u ilaaliso cidiyahaaga fiiqan.
Sideen kaaga caawin karnaa inaad dareento raaxo badan guriga?
Marka lagu daro ku siinta adiga daryeelka aasaasiga ah, waxaa jira dhowr waxyaabood oo ay tahay inaan sameyno si aan uga fogaanno lama filaan aan fiicneyn, isla markaana, uga dhigno inuu isaga dareemo raaxo badan oo nala noolaado Iyadoo la tixgelinayo in dhulkeedu u qaybsan yahay aagag kala duwan, waxa ay tahay inaan sameyno waa meel dhig cuntadaada iyo biyahaaga, laakiin ka fogow qashinka.
Alaabada uu ku ciyaaro, xoqitaankiisa, iyo xitaa sariirtiisa waa inay ku jiraan qol kale oo reerku degan yahay. Tusaale ahaan, hoolka ama qolka fadhiga. Sidan oo kale waxay awood u yeelan doontaa inay "ugaarsato", inkasta oo si dabiici ah loo sameeyo, iyadoo kaamil ah farsamooyinka ugaadhsiga ugaarsiga.
Ugu dambeyntii aad ayey muhiim u tahay inaad hesho meel aad ku nasato. Qolkan dhexdiisa waa inaad xasilloonaan kartaa, iyadoo aan cidina ku qasbin.
Waxa la sameeyo marka bisadu aad u dhul ahaato
Kuweena la nool bisadaha waxay ogyihiin in qaybtaan "duurjoogta ah" had iyo jeer iyaga ku sii socoto, in kasta oo dabcan iyo talooyinka aan ku siinay, ay si fiican ula qabsan karaan guriga iyo inay la noolaadaan qoyska. Haddii aad siiso hoy, cunto, biyo, iyo jacayl badan, bisaddaadu waxay dareemi doontaa wax weyn oo hareerahaaga ah.
Laakiin xididdadiisa xididaysan waxay ka dhigayaan dhulkaas xooga leh ee dareemaya inay iyagu leeyihiin oo aan cidina ku soo xadgudbi karin. In kasta oo ay tahay dhaqan caadi ah sidaan kor ku soo sharaxnay, waxaa muhiim ah in maanka lagu hayo in haddii ay noqoto bisad dhuleed aad u badan ay dhibaato noo keeni karto, gaar ahaan haddii aan haysanno xayawaan badan ama haddii aan doonayno inaan ku darno qoyskeenna.
Xadka xadka bisad duurjoogta ama nus-ka-xorta ah
Bisadda gudaha ayaa garaneysa halka ay xadkeeda tahay (derbiyada guriga), laakiin bisadaha duurjoogta ah ama bisadaha ku nool xorriyadda nus-nimada ayaa ballaarin kara xuduudahooda sidaan kor ku soo sheegnay. Waxyaabaha lagu soo daray aagagga ficillada waxay ku tiirsan yihiin, wixii ka sarreeya, ilaha awoodeed.
Bisadu waxay ku noolaan doontaa meel u dhow halka ay ku haysato cunto iyo biyo, sidoo kale haddii ay jiraan bisado badan oo ka agdhow, gaar ahaan bisadahaas oo raadinaya dheddig inay is guursadaan. Caadi ahaan, bisadaha labku waxay u muuqdaan inay leeyihiin dhul ka ballaaran kan dumarka mararka qaarkoodna way wadaagi karaan dhul, laakiin badanaa waxay sababtaa isku dhac u dhexeeya ragga aan jilicsaneyn xilliyada kuleylka.
Bisadu goorma ayey calaamadeysaa dhulkeeda?
Bisadu waxay astaan ​​u tahay dhulkeeda kuwa kale iyo nafteeda. Marka kuwa kale waxay ogaan doonaan inay tani tahay dhulkoodii iyo sidoo kale, sidoo kale waa is-aqoonsi. Waxay badanaa isticmaashaa astaamaha muuqaalka iyo urta: xoqida, kaadida ...) Sidaa darteed, bisadda guryaha joogta waxay ubaahantahay boosteejo xoq ah iyo in bisada labka ah aysan kufeerin goobta oo dhan, way fiicantahay tuur isaga.
Hawlaha calaamadaha bisadaha
Waa lagama maarmaan in la ogaado sida loo fasiro astaamaha bisadaha, maxaa yeelay marwalba kuma xirna soohdintooda. Waxaa jira waqtiyo ay noocyadan leeyihiin ujeedo kale oo ay tahay inaad ogaato:
Calaamadaha Territorial, calaamadee joogitaankooda meel, sida aan ku sharaxnay maqaalka oo dhan.
Calaamadaha digniinta. Waxay dhacdaa marka bisadu dareento culeys daran sababo jira awgood. Waxaa badanaa lagu sameeyaa kiishashka dabada.
Calaamadaha lagu barto ama aqoonsi. Qeyb ka mid ah jirkaaga sida madaxa ama dhabarka ayaa badanaa la mariyaa si urta qofka ama shayga aad u aragto inuusan urku laheyn oo ay tahay inaad calaamadeyso. In kasta oo aad sidoo kale ku samayn karto si fudud adoo jacaylkaaga u muujinaya noolaha kale.
Marka lagu daro astaamaha aan kor ku soo sheegnay, bisadu sidoo kale waxay u calaamadeyn kartaa dhulkeeda siyaabo kale: iyada oo loo marayo isgaarsiinta dhaqameed (maqalka: meowing and purring) iyo muuqaal (boosaska lagu calaamadeynayo awooda sida ku jiifsashada dhabarka oo muujinaya caloosha ama qeybaheeda, xitaa tuurista xoogaa galmada ah).
Waxaan rajeynayaa inaad waxbadan ka baratay dabeecadaha dhuleed ee bisadaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Dhammaan wixii ku saabsan dabeecadda dhuleed ee bisadaha
Rocío Martinez dijo
Waad salaaman tihiin. Waxaan u guurayaa magaalo kale waxaanan doonayaa inaan ogaado sida aan ula qabsan karo oo aanan u lumin bisaddayda. Waa 4 jir jirkuna dhexdhexaad yahay. Waxaan haystaa laba eey oo nooca loo yaqaan poodle-ka oo aan kula noolahay wada noolaansho saaxiibtinimo Mahadsanid Rocçio
Jawaab ku sii Rocío Martínez
Waa salaaman tahay Rocio.
Marka hore, ku dheji silsilad leh saxan aqoonsi iyo microchip, haddii uusan haysan. Ma ogaan kartid waxa dhici kara.
Kadib, waxaan kugula talinayaa inaad guriga ku haysato ugu yaraan 4 maalmood (sida ugu fiican usbuucii) adigoon baxayn. Inta lagu jiro waqtigaas, waxaad baran doontaa in meeshani ay tahay meesha aad ku badbaadi karto, ee aad ku haysato cuntadaada, biyahaaga, iyo qoyskaaga.
Kadibna, haddii aad sii deynaysid, ha u yaraadee si tartiib tartiib ah. Marka hore ha fiiriyo daaqadda xidhan, ka dibna soo qaado oo dibadda u kaxee, ugu dambayntiina keligiis ha tago.
Sikastaba xaalku ha noqdee, hadaad aado magaalo kale, laguguma talinaayo inay bisadu baxdo, maadaama ay jiraan qatar badan.
Haddii aad u baahan tahay talo ku saabsan guuritaanka, waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriso maqaalkan.